လန်ဒန်ခုနှစ်တွင်လုပ်ဖို့, ဘယ်လိုရှိတယ် Get ရန်အကောင်းဆုံးအရာ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထားခရီးသွားယူကေ > လန်ဒန်ခုနှစ်တွင်လုပ်ဖို့, ဘယ်လိုရှိတယ် Get ရန်အကောင်းဆုံးအရာ
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 17/04/2020)
အခါဥရောပရဲ့အကျော်ကြားဆုံးမြို့တော်သို့သွားရောက်ခြင်းမှကြွလာ, လန်ဒန်တိုင်းခရီးသွားဧည့်ရဲ့ဆန္ဒစာရင်း၏ထိပ်မှာသခြောသည်နှင့်လုပ်ပါရန်အများအပြားအရာလန်ဒန်မှာရှိတဲ့ရှိပါတယ်. ဒါဟာတာရှည်တယ်ရဲ့, စိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်း; လှပသောအထင်ကရအဆောက်အနှင့်မြင်ကွင်းများ; အဲဒီမှာလုပ်သောအရာတို့ကိုများများရှိတယ်. သင်တစ်ဦးလွယ်ကူတဲ့သွားနေပဲဖြစ်ဖြစ် ခရီးသည် သူသိရန်လို ဒေသဆိုင်ရာ ယဉျကြေးမှု, သို့မဟုတ်တစ်ဦးစွန့်စားစိတ်လှုပ်ရှားရှာဖွေနေ, လန်ဒန်သင်တို့အဘို့ store မှာတစ်ခုခုရှိတယ်.
ဒါပေါ့, လန်ဒန်မြို့ရှိဘာလုပ်ရမှန်းအကြောင်းကို သိ. ထက်အခြား, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ခရီးသွားများ၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးထွက်တွက်ဆဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်. ရထားအဲဒီမှာရယူခြင်းအရှိဆုံးကသဘာဝရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သငျသညျပဲရစ်နဲ့တူအဓိကဥရောပမြို့မြို့တို့မှခရီးသွားလာနေ, အထူးသဖြင့်လျှင်, အမ်စတာဒမ်, သို့မဟုတ်ဘာလင်. ဒီနေရာတွင်ကကူညီလိမ့်မည်ဟုဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ရထားခြုံငုံသုံးသပ်င် သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်စီစဉ်:
လန်ဒန်ကဲ့သို့ကြီးမားသောတစ်မြို့အတွက်, အနည်းငယ်ရွေးချယ်စရာမှလှုပ်ရှားမှုများများ၏စာရင်းချကျဉ်းမြောင်းနီးပါးမဖြစ်နိုင်ဘူး. သငျသညျအပေါငျးတို့သမြင်ကွင်းများကိုတွေ့မြင်အပေါင်းတို့နှင့်အတူဖမ်းပါလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှ စစ်မှန်လန်ဒန်အတွေ့အကြုံများ တဦးတည်းခရီးစဉ်အတွင်း. ကျနော်တို့ကြိုတင်သင့်ရဲ့ဦးစားပေး setting အကြံပြုဒါကြောင့်ဖွင့်.
ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းလန်ဒန်မှာရှိတဲ့ Do ရန်အရာများအတွက်ကိုကြည့်တဲ့သူကိုသင်တို့တွင်သူတို့အဘို့ စျေးဝယ်, ကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်ဖွစျလိမျ့မညျ သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်၏မီးမောင်းထိုးပြ. သင်တို့အဘို့ရှာကြသည် အစစ်အမှန်ဖြစ်သော, ဒေသခံအစားအစာ? အဆိုပါ Borough Market ကထွက် Check နှင့်၎င်း၏အမြည်း gastronomic ပျော်မွေ့, သို့မဟုတ်အနီးအနားစားသောက်ဆိုင်တစ်ဦးမှာမစား. သငျသညျအခြို့သောဌာနစတိုးဆိုင်စျေးဝယ်များအတွက်စိတ်ဓါတ်များပိုမိုဆိုရင်, လွှတ်ခြင်းအခွင့်ကိုကြီးစွာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. တစ်နည်းအားဖြင့်, မှာအချို့အေးမြရှေးဟောင်းပစ္စည်းအဘို့အမဲကိုသွား Portobello လမ်းမကြီး Market က.
လန်ဒန်ရန်သင့်ခရီးစဉ်တစ်ခုပညာရေးဆိုင်ရာဇာတ်ကောင်ပိုရှိပါက, မြို့ယဉ်ကျေးမှုဟော့စပေါ့အချို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု. ၏ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးတက်ရောက်ခြင်းမှသည် ရှိတ်စပီးယားရဲ့ကမ္ဘာလုံး လန်ဒန်၏မျှော်စင်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်, သင်ပြုပဒေသာရှိသည်လိမ့်မယ်. ကျနော်တို့ကိုလည်းတောင်ပိုင်းဘဏ်အပေါ်တိတ်မော်ဒန်မှာခေတ်ပြိုင်အနုပညာကိုခံစားအကြံပြုချင်ပါတယ်, အဖြစ် Southbank Centre ကိုလာရောက်လည်ပတ်.
ပဲရစ်ကနေရထားသဖြင့်လန်ဒန်မှရယူခြင်း, အမ်စတာဒမ်, နှင့်ဘာလင်
သင့်ထံမှလန်ဒန်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ပဲရစ်, အမ်စတာဒမ်, နှင့် ဘာလင် အလွယ်တကူ Eurostar မှတဆင့်, အချင်းချင်းနှင့် Thalys ရထား. အဆိုပါ စတင်. ခရီးစဉ်အချို့မှာအခြားသူများထက်လန်ဒန်သို့ရောက်ရှိတစ်ဦးထက်ပိုသောသဘာဝအလမ်းရလိမ့်မည်. ဥပမာ, သင်တစ်ဦးပေါ်နိုင်ပါတယ် Eurostar မြန်နှုန်းမြင့် တိုက်ရိုက် ပဲရစ်ကနေလန်ဒန်ကိုရထား, နှစ်ယောက်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲနာရီကျော်အနည်းငယ်မရှိစေ.
ဘယ်အချိန်မှာကအမ်စတာဒမ်နှင့်ဘာလင်ကနေလန်ဒန်ကိုခရီးသွားလာရန်ကြွလာ, အမ်စတာဒမ်ကနေ, သင်ပထမဦးဆုံးဘရပ်ဆဲလ်ကနေတဆင့်ရပေသည်တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်အခြားကောင်းသော option ကို Eurostar ယူနိုင်ပါသည် Thalys ပြီးတော့လန်ဒန်ကိုဘရပ်ဆဲလ်မှာရှိတဲ့ Eurostar ပေါ်. အဆိုပါ ခရီးသွားခြင်း အကြောင်းကိုလေးနာရီကြောင်းလမ်းကြာနှင့်ရထားအမ်စတာဒမ်ကနေလန်ဒန်ကိုရောက်ရှိဖို့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်.
ရထားဘာလင်ကနေဗြိတိန်မြို့တော်မှရယူခြင်းနှစ်ခုအပြောင်းအလဲများကိုလိုအပ်ပေလိမ့်မည်. ခရီး၏နောက်ဆုံးခြေထောက်အမ်စတာဒမ်ကနေအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, ထို့နောက် Eurostar boarding. သို့သျောလညျး, အခြားရွေးချယ်စရာဖို့ဘာလင်ကနေကနေခရီးသွားလာလေ့ကျင့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် Cologne, ဘယ်မှာသင်လို ဘရပ်ဆဲလ်ရန်မီးရထားပေါ်. ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အမြန်ဆုံးရထား ဘာလင်ကနေလန်ဒန်ကိုခရီးနှင့်လျော့နည်းထို့နောက်အနည်းငယ်ကြာ 10 နာရီနှင့်ထို့နောက်သင်သည်လန်ဒန်ကိုပြုကြရန်သင့်အားအမှုအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသင်ယူမြှလုပျနိုငျ.
သငျသညျလန်ဒန်မှာလုပ်ဖို့သင်အကြိုက်ဆုံးအမှုအရာဖြစ်လတံ့သောအရာကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်င့်ဆိုပါက, သငျသညျကိုသာခရီးကိုလုပ်ဖို့လိုအပျ! ရထားအဲဒီမှာရယူခြင်း လွယ်ကူသည်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးထူးဆန်းသောအားလပ်ရက်အဘို့အသွားနှင့်သင့်ထိုင်ခုံစာအုပ်ဆိုင်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-things-to-do-london/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#traveluk europetravel လန်ဒန် ရထားခရီးသွား uktravel